Dr Cismaan Dufle oo Caawa isku day dil ka badbaaday | Warkii.com
Home warkii Dr Cismaan Dufle oo Caawa isku day dil ka badbaaday
Qarax noociisa lagu sheegay miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa caawa lala beegsaday gaariga Prof. Cismaan Maxamuud Dufle oo marayey wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Inta la xaqiijiyey laba qof ayey dhawacyo ka soo gaareen qaraxaas, waxuuna burbur xoog leh soo gaaray gaariga Digtoorka, illaa hadana ma cadda in goorta la qarxiyey gaariga uu la socday Prof. Dufle, balse waxaa la xaqiijiyey inuu bad-qabo.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel aan ka dheereyn taallada Sayidka oo ay Bar Conrtol ku leeyihiin ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya.
Prof. Cismaan Maxamuud Dufle ayaa haatan ah Senator ka tirsan golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale qaraxyo loola beegsaday Dr. Dufle, balse wax kuma noqon.
Al-Shabaab ayaa inta badan Muqdisho ka fuliya qaraxyada noocaan oo kale ah, waxayna la beegsadaan gaadiidka mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay la socdaan, waxaase xusid mudan in khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaro shacabka.
Habeen ka hor ayaa isgoyska KM-4 ee magaalada Muqdisho qarax noocaan oo kale ah lagula beegsaday kolonyo gaadiid ah oo uu la socday wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada xukuumadda Soomaaliya Duraan Faarax, waxaana looga dhaawacay laba askari.
Previous articleWAA KUMA JOE BIDEN OO MUDDO 50 SANO AH RAADINAYAY MADAXTINIMADA MAREYKANKA ?
Next articleXog: Maamulka G/Banaadir oo arday badan iskuullada ugu eryey sabab yaab leh
Sawirro: Shan baabuur oo isku dhacay, kadib shil ka dhacay duleedka...
Ugu yaraan labo ruux ayaa ku geeriyootay, kadib shil gaari oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay duleedka Garoowe ee xarunta Puntland. Wararka ayaa sheegaya...
Askari ka tirsan ciidamada DF oo dil ka geystay Muqdisho
Dhinacyo culus oo ku biiray shirka Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey
CC Shakuur oo ka hadlay raali-gelintii uu siiyey Xasan Kheyre, dalab...